ध्वस्त चलचित्र, ध्वस्त बजार
२०७४ फागुन २६ शनिबार ०७:१४:००
– प्रशान्तराज कार्की
सन् १९५१ मा डीबी परियारद्वारा निर्मित ‘सत्य हरिशचन्द्र’ प्रदर्शनपश्चात नेपाली भाषाको चलचित्र श्रीगणेश भएको हो । त्यसको झन्डै १३ वर्षपछि तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्माणमा हीरासिंह खत्री निर्देशित ‘आमा’ सन् १९६४ मा प्रदर्शन भयो । ‘आमा’को निर्माणलाई व्यावसायिक नेपाली चलचित्र बजारको पहिलो कोसेढुंगाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस निर्माणले नेपाली चलचित्र जगतलाई मार्गदर्शन गरेको हो । सन् १९६६ मा समोन्जली फिल्म्सको ब्यानरमा बीएस थापा निर्देशिन ‘माइतीघर’ प्रदर्शन भयो । यसरी व्यक्तिगत लगानीमा चलचित्र बनेसँगै नेपालमा विधिवत रूपमा चलचित्र व्यापार सुरु भएको हो ।
सन् १९८० देखि १९९० को मध्यसम्मको काललाई नेपाली चलचित्रको सुनौलो कालखण्डका रूपमा हेरिन्छ । ‘सम्झना’, ‘कुसुमेरुमाल’, ‘लाहुरे’, ‘कान्छी’, ‘बासुदेव’, ‘साइनो’, ‘कोसेली’ जस्ता चलचित्रले नेपाली सिनेमा जगतलाई नयाँ आयाम दिए । सन् १९९० पछि नेपालले अवलम्बन गरेको उदारवादी नीतिको पछ्यौरी समाउँदै नेपाली सिनेमाले तत्कालीन हिन्दी चलचित्रको नेपाली बजारलाई समेत प्रभावित पारेको थियो । २५ वर्षमा जम्माजम्मी २५ वटा निर्माण भए । त्यसपछि झन्डै तीन वर्षमा १४० भन्दा बढी फिल्म प्रदर्शनमा आए । त्यसयता सिनेमा व्यापारलाई स्थापित उद्योगको रूपमा हेर्न थालियो । चलचित्र निर्माण, वितरण र विस्तारले विभिन्न रोजगारी उत्पादन गर्न थाल्यो र फिल्म एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित भयो । सन् १९८३ को अन्त्यतिर स्थापित नेपाल टेलिभिजन फिल्म बजारका लागि नयाँ सम्भावना बनेर उदायो । शनिबार दिउँसो २ बजे नेपाली चलचित्र प्रसारणले नेपाली चलचित्र उद्योगमा नयाँ अध्याय शुरु भयो ।
सन् १९९६ देखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले गाउँ र साना सहरमा व्यापार ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसले नेपाली सिने बजारलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पा¥यो । नेपाली सिनेमामा विस्थापित हुने एउटा युग नै प्रारम्भ भयो । नेपाली सिनेमामा भेटेरान मानिने नायकहरू एकाएक बिदेसिन थाले । सिने बजार झनपछि झन ओरालो लाग्न थाल्यो । यद्यपि ‘दर्पण छाया’, ‘जिन्दगानी’ जस्ता कालजयी चलचित्र यही समयमा प्रदर्शन भए । तर, समग्रमा नेपाली सिनेमाले राम्रो दिन भने देखेन र हिन्दी सिनेमाले मनग्य बजार विस्तार गर्‍यो ।
सन् २००६ मा जनयुद्ध समाप्त भएपश्चात् नेपाली सिनेमाले नयाँ मोड लियो । बदलिएको सिनेमा बजारलाई बुझेर फिल्म निर्माणमा अत्याधुनिकीकरण प्रविधि भित्र्याइयो । वितरण, प्रदर्शन र प्रचारमा नयाँ प्रयोग हुन थाले । पहिले हल र टेलिभिजनको पर्दामा सीमित नेपाली चलचित्र डीभीडीको युगमा प्रवेश गर्‍यो । फिल्म हल र टेलिभिजनसँगै कम्प्युटरमा हेर्न थालियो । भर्खरै पुनर्जीवन पाएको नेपाली सिनेमाले हलमा भने संघर्ष गरी नै रहे । हिन्दी सिनेमाको बाक्लो उपस्थिति हुनुमा हिन्दी सिनेमामै हुर्केको नयाँ पुस्ताको बढ्दो संख्याले भूमिका खेल्यो । त्यससँगै मध्यमवर्गका मौलिक कथा भन्न सकिएन । नयाँ प्रविधि जन्मिए पनि अँगाल्न नसक्दा नेपाली चलचित्रले भनेजस्तो व्यापार गर्न सकेनन् । यही कालखण्डमा पाइरेसी शुरु भयो ।
नेपाली सिनेमाले बजार त पाइरह्यो तर यसको नियमन र वितरणमा हुने कालोबजारीले पनि उत्तिकै प्रश्रय पायो । हलबाट विस्थापित भइरहेको फिल्मले अरु बजार खोजिरहेको थियो । विश्व बजारबाटै विस्थापित हुन लागेको डीभीडी र त्यसको पाइरेसीको सामना नेपाली सिनेमाले गर्नु परिरहेको थियो । छिमेकी मुलुकमा बनिरहेका हिन्दी सिनेमाबाटै कथाको नक्कलमात्रै भइरहेको थियो, बजारको नक्कल गरिएकै थिएन । सन् २००५ मा सुरु भएको यूट्युबले सन् २०११ तिरबाट नेपाली बजारमा स्थान पायो र त्यसयता नेपाली सिनेमाको अर्को नयाँ आयाम शुरु भयो । नेपाली सिनेमा हेर्ने यो सबैभन्दा सजिलो माध्यम बन्यो र यसैलाई मुख्य दर्शकका रूपमा हेर्नसमेत थालियो । त्यस्तै, सन् २००९ मा शुरु भएको डिसहोमले २०१७ बाट होम भिडियोका रूपमा रेगुलर र प्रिमियम च्यानल प्रस्तुत गरेर नेपाली सिनेमा देखाइरहेको छ ।
आज एउटा नेपाली फिल्म हलमा प्रदर्शन भएपछि सिधै डिसहोममार्फत घरघरमा पुग्न सक्छ । अरु च्यानलहरूमार्फत पनि टेलिभिजनको पर्दामा सजिन सक्छ । यूट्युबले हरेक हातमा सहजै फिल्म पुर्‍याइदिन सक्छ । तैपनि भनिन्छ– औसत १० नेपाली फिल्ममध्ये ९ घाटामा जान्छन् । आखिर किन ?
फिल्म वितरण यो घाटाको मुख्य कारण हो । झन्डै १ लाख ३० हजार नेपालीबराबर एक हल भएको हाम्रो देशमा नेपाली सिनेमाले हलिउड र बलिउडका उम्दा सिनेमाको बजारसँग जुध्नुपर्ने बाध्यता छ । हल सबै सहरमा खुलेका छन्, जहाँ हिन्दी र कमबेसी अंग्रेजी फिल्म रुचाउनेको जमात बढी छ । बजार मागको सिद्धान्त हुन्छ । माग त्यसलाई भनिन्छ, जहाँ चाहनालाई क्रयशक्तिले टेवा दिएको हुन्छ । नेपाली सिनेमाप्रतिको चाहना र आमनेपालीको क्रयशक्ति बढ्दै गए पनि हाम्रो बजार त्यस चाहनालाई मागमा रुपान्तरण गराउन असफल भएकै हो । १ लाख ३० हजार जनाबराबर एक हल भएको देशमा फिल्मले बजार पाएन भन्दा हाँसो उठ्छ ।
नेपाली फिल्म आज औसत पाँचमा दुई नेपालीले हेरेका हुन्छन् । तर, नेपाली फिल्म घाटाको व्यापार गर्दै छन् । यो हुनुको पछाडि केही समस्याहरू छन् । आखिर नेपालीहरूले नेपाली सिनेमा कसरी हेर्छन् ? यो प्रश्न सोधिनु आवश्यक छ ।
हरेक तीन नेपाली बराबर दुई वटा स्मार्टफोन रहेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । आजको युगमा भिडियो खपतको सबैभन्दा विशाल माध्यम हो स्मार्टफोन । के त्यसो भए झन्डै ६३ प्रतिशत जनतामाझ पुगेको इन्टरनेट नेपाली फिल्मको दर्शकका लागि सजिलो माध्यम बनेको हो त ? यदि यस्तो भइदिएको भए पनि नेपाली सिनेमा घाटामा अवश्य जाँदैनथे । तर, यहाँ फिल्महरू मोबाइल र पेनड्राइभमा भरिदिने खतरनाक धन्दा शुरु भएको छ । हेर्दा अचम्म लाग्ने गरी पाइरेसीको नजानिँदो जाल देशैभरि फैलिएको छ । देशभरि झन्डै ६० हजार यस्ता पसल छन्, जसले यसरी फिल्म बिक्री गर्दै आएका छन् । एकछिनलाई मानौं हरेक पसलमा औसत १० जना ग्राहक आउँछन् र त्यसमध्ये २५ प्रतिशतले नेपाली फिल्म किन्छन् भने १५ रुपैयाँको एक फिल्मबराबर हरेक महिना ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन्छ । यो त सामान्य अनुमानमात्र हो । यो पाइरेसी सिनेमा र गीतको बजार झन्डै १ अर्बको आसपास हुनुपर्छ । यसले राज्यलाई राजस्व घाटा हुँदाहुँदै पनि सरकारले ठोस कदम नचाल्दा व्यापारीहरू चरम घाटामा छन् । त्यसो भए कहाँबाट आउँछन् ती पसलमा नेपाली फिल्म ?
नेपाली फिल्मका लागि डिजिटल राइट एउटा मुख्य स्रोत हो । डिजिटल राइट किन्नेका लागि यूट्युब प्रमुख आयको स्रोत हो । यूट्युब सबैका लागि सजिलो माध्यम बनेको छ । तेस्रोपक्षीय सफ्टवेयर प्रयोग गरी युट्युबबाट सहजै डाउनलोड गर्न सकिने र सजिलै ट्रान्सफर भइदिने हुँदा कति पसललाई त यो गैरकानुनी हो भन्ने पनि थाहा छैन । त्यसैले यो व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । अब त मास्टर कपी नै लिक हुने गरेका घटना पनि सुनिन थालेका छन् । त्यसमाथि अब त फिल्म आएको केही दिनमै डिसहोमले प्रसारण गरिदिन्छ, जहाँबाट सहजै पेनड्राइभमा फिल्म रेकर्ड गर्न सकिन्छ । यी सब माध्यमबाट अहिले नेपाली सिनेमा पाइरेसीको शिकार भइरहेको छ ।
यी पाइरेसीका घटनालाई कति सामान्य रूपमा लिइएको छ भने हामी जोकोहीसँग मोबाइलमा गीत वा फिल्म भइरहेका हुन्छन् । हरेक होटल वा सार्वजनिक यातायातमा पेनड्राइभ वा मेमोरी कार्ड देखिनु सामान्य लाग्छन् । नाइटबसमा पाइने टेलिभिजन स्क्रिन होस् वा साझाको बसमा देखिने स्क्रिन, पाइरेटेड फिल्म वा भिडियो देखाइनु एकदम सामान्य भएको छ । हरेक वर्ष औसत सयभन्दा बढी फिल्म प्रदर्शनमा आउँदा २ करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने फिल्म जम्मा पाँच वटा हुन्छन् । पाइरेसीले कति ठूलो जालो बनाएको छ, यसबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपाली फिल्मको नियति यही नै हो त ?
नेपाली चलचित्रमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनलाई आधुनिक बजारीकरणले टेको दिनुपर्छ । सन् २०१७ को एक तथ्यांकअनुसार संसारभर प्रयोग भएको ब्यान्डविथमध्ये ७४ प्रतिशत भिडियो हेर्नका लागि खपत भइरहेको छ । मोबाइल डाटाको पनि ६९ प्रतिशत भिडियो हेर्नमै खपत हुने गरेको त्यो अध्ययनले देखाउँछ । मोबाइलमा भिडियो प्रसारण गर्न सक्ने प्रविधिले नेपाली सिनेमालाई नयाँ खुड्किलोमा लैजान सक्छ । तर, मोबाइलमा प्रसारण गर्नका लागि केही समस्या भने छन् । पाइरेसी हुन सक्ने सबैभन्दा ठूलो डर यहीँ रहन्छ । सेक्युरिटीमा ध्यान दिएर यसलाई राम्रोसँग नियमन गरे यसले नेपाली सिनेमाको बजार विस्तारमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ । त्यसैगरी विद्युतीय भुक्तानी सेवामा सहजता र पेमेन्ट गेटवेमा सरलीकरण गरे चलचित्र बजारले ठूलो राहत पाउन सक्छ ।
नेपाली चलचित्र र सांगीतिक उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारकै स्तरबाट नियमन हुन जरुरी छ । सार्वजनिक स्थलमा पाइरेसी भइरहेको देख्दादेख्दै र यसबाट करोडौं राजस्व घाटा हुँदासमेत सरकारले ध्यान नदिने हो भने भने हाम्रो सिनेमा बजार अझै ध्वस्त हुन्छ । सरकारले सिनेमा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कोष नै निर्माण गरी उदीयमान निर्मातालाई सहयोग गर्नुपर्छ । चाहिँदो सहयोग र नियमन गरे यो उद्योगले फड्को मार्ने थियो र मनग्य रोजगार र राजस्वको स्रोत हुने थियो ।
नेपाली चलचित्र उद्योगको शुरुवात नै वैदेशिक लगानीबाट भएको हो । तर, अहिले त्यो कतै देखिँदैन । मूलधारका नेपाली सिनेमामा वैदेशिक लगानी आउन नसक्नु पनि अर्को चुनौती हो । वैदेशिक लगानीले प्राविधिक विकासमा मनग्य टेवा पुर्‍याउने हुँदा यो आवश्यक छ । यो उद्योगमा सम्बन्धित व्यवसायीहरूले पारदर्शिता नदेखाउने हुँदा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकिएको प्रष्ट छ । बक्स अफिस नहुनु र व्यापारिक लाभका लागि गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरिनाले तत्काल नेपाली सिनेमामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन । अहिल्यै गम्भीर हुने हो भने यो अवस्था सधैं रहिरहँदैन ।